२०७८ भदौ, ८
काठमाडौंमा भदौ १७ देखि २१ गतेसम्म ‘पाँचौंं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला–२०२१’ हुँदै छ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित महिला उद्यमीहरूका लागि भर्चुअल एक्स्पो बजार विस्तार र खोजीको अवसर पनि हो । यसै सन्दर्भमा एक्स्पोको तयारीबारे महासंघ अध्यक्ष रीता सिम्हासँग हिमा वि.कले गरेको कुराकानी :
एक सातापछि मेला गर्दै हुनुहुन्छ । तयारी कस्तो छ ?
अहिले कोभिड महामारीकै बीचमा छौं । त्यसैले यो वर्ष भर्चुअल माध्यमबाट पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी मेला आउँदो भदौ १७ गते गर्दै छौं । विगत वर्षमा भौतिक उपस्थितिमा गरिँदै आएको मेला यस वर्ष भने डिलिटल एक्स्पोका रूपमा गर्न लागिएको छ । महिला उद्यमीका लागि यो अनुभव र सिकाइ पनि हो । यसले बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।
भर्चुअल माध्यमबाट गरिने मेलाको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
अनलाइनबाट जान एक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर मेलामा राखिने उत्पादनको फोटो खिच्नेदेखि अन्य काम गरिरहेका छौं । हामीले संघका सदस्यलाई अहिले १० वटा उत्पादन मात्रै पठाउन भनेका छौं । उहाँहरूले खिचेर पठाएका फोटा अहिले अपलोड गर्ने काम भइरहेका छन् । अहिले स्पोन्सर पनि आउन थालेका छन् । हालसम्म ९० प्रतिशत तयारी सकिइसकेको छ । मेलमा राखिने उत्पादन सबै अनलाइनमा हुन्छन् । त्यसमा ल्यान्डिङ पेज राख्दै एउटा फिचर स्टल र अर्काे अर्डिनरी स्टल हुन्छ । लिंकमा क्लिक गरेर भिजिट गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विनबिज डटकम पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यो २०१७ मै लन्च भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम भएको थिएन । मेला अवसर पारेर यो वेब पोर्टल प्रयोग गरिएको छ । अनलाइन बजारीकरणलाई अब निरन्तरता दिनेछौं ।
मेलामा सहभागी हुने महिला उद्यमी एक्स्पोमा कसरी जोडिनुहुन्छ ?
महामारीले धेरै उद्यमी अहिले अनलाइनमा छौं । जिल्लाको सदस्यदेखि लिएर केन्द्रसम्म हामी भाइवर तथा अन्य माध्यमबाट जोडिरहेका छौं । जिल्ला संयोजकमार्फत यस्ता ग्रुपमार्फत जानकारी दिने र केन्द्रबाट फोटो, खिच्न पठाउने वा त्यही भएकाले पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहभागी हुनेलाई भने इमेल, जुमजस्ता माध्यमबाट जानकारी गराइरहेका छौं ।
भर्चुअल मेला गर्दाका चुनौती र फाइदा के–के हुन् ?
अहिले निषेधाज्ञाकै अवस्था भएकाले अनलाइन मार्केटिङ हाम्रा लागि अवसर हो । धेरैजसो उत्पादन राम्रो भए पनि प्याकेजिङ, लेबलिङ राम्रो हुँदैन । पेमेन्ट प्रणाली, केही गरी सामग्री फिर्ता भयो भने के गर्ने भन्नेलगायत विषयमा धेरै अभ्यास गर्नुपर्नेछ । कोभिडको डरले मानिस बाहिर निस्कन त्यति रुचाउन्नन् । अनलाइनबाट उत्पादन सप्लाइ हुने हुँदा फाइदा पनि छ । हामीले सदस्यलाई प्याकेजिङ, लेबलिङजस्ता विषयमा केही तालिम दिएका छौं । डिलिजट मार्केटिङमा जान यो मेला अवसर पनि हो । यसले प्रविधिमैत्री हुन पनि सहयोग पुगेको छ ।
भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल माध्यमबाट गर्दाको तयारी गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ ?
प्राविधिक रूपमा हामीलाई धेरै चुनौती भयो । भौतिक रूपमा जाँदा एक स्थानमा गएर उत्पादन राखेर प्रदर्शनी गरिन्थ्यो । तर, भर्चुअलबाट गर्दा प्रविधि विज्ञसँग भर पर्नुपर्ने भयो । यसमा फोटोग्राफर, गुणस्तरीय फोटो पनि राख्नुपर्ने भएकाले अहिले अनुभवका लागि पनि यस्तो निर्णय गरेका हौं । अहिलेको स्थितिले पनि अनलाइनमा जानैपर्ने अवस्था छ ।
कोभिडले गत वर्ष मेला सञ्चालन नगरे पनि अहिले गर्नुपर्ने कारण के हो ?
महिला उद्यमीले आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सकून् भनेरै मेला आयोजना गर्न लागेका हौं । यसका लागि विकल्प अनलाइन मार्केटिङलाई सदुपयोग गर्नु हो । उत्पादन प्रदर्शनीका लागि प्ल्याटफर्म दिनु हो । महिला उद्यमी तथा व्यापारीलाई न्यूनतम खर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेलामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नु पनि मेलाको उद्देश्यल । उद्यमीका उत्पादनलाई प्ल्याटफर्म दिएर तिनका वस्तु विक्री मा सघाउनु पनि हो । व्यवसाय बढाउने भएकाले भर्चुअल एक्स्पो गर्नैपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।
निषेधाज्ञाका कारण लघु तथा मझौला उद्यम कत्तिको प्रभावित भए ?
महामारीले कतिपय लघु तथा मझौला उद्यम बन्द हुने अवस्थामै पुगेका छन् । तर, अहिले व्यवसाय अलि सहज भएको छ । यो अवधिमा हामीलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा बढी समस्या भयो । कच्चा पदार्थ सहज भइदिए महिलाहरू घरमै बसेर काम गर्न सक्थे । कच्चा पदार्थका लागि बाहिरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी नीति राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमीका लागि स्टलको मूल्य कति–कति तोक्नुभएको छ ?
महासंघका सदस्य महिला उद्यमीका लागि ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्य स्टलका लागि ७ हजार तोकिएको छ । विदेशबाट सहभागी हुनेहरूका लागि भने १५० डलर तोकिएको छ । १ सय स्टलले सहभागिता जनाउने भएकामा हालसम्म ७० वटा बुक भइसकेका छन् ।
एक्स्पोमा कस्ता उत्पादन राख्दै हुनुहुन्छ ?
मेलामा कृषिजन्य, ह्यान्डिक्राफ्ट, सर्भिस भनेर क्षेत्र छुट्याइएको छ । एग्री बिजनेसमा मह, फुड, टेक्सटायल, नेचुरल हर्बल, बुटिक, गार्मेटलगायत वस्तु राखिनेछ ।
भर्चुअल एक्स्पोमा कुन–कुन देशबाट सहभागिता हुँदै छ ?
अहिले नै कन्फर्म भइसकेको छैन । तर, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, श्रीलंकाबाट चासो देखिएको छ । स्टलको मूल्य बढी भयो भन्ने उनीहरूको आशय छ । यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।